आजदेखि ‘टिकट बुकिङ’, रुट इजाजत खुला - samayapost.com
आजदेखि ‘टिकट बुकिङ’, रुट इजाजत खुला
पत्रपत्रिका २०७८ असोज ११ गते ७:१६
सरकारले नजिकिएका चाडपर्वलाई लक्षित गरी सार्वजनिक सवारीसाधनहरूको ‘रुट इजाजत’ खुला गर्ने भएको छ ।
त्यसैगरी, यातायात व्यवस्था विभागले घटस्थापनादेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म ‘मल्टी एक्सल ट्याक्टर ट्रेलर’ काठमाडौँ भित्रिनमा रोक लगाइएको विभागका प्रवक्ता डा. लोकनाथ भुसालले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सो अवधिमा खाद्यानलगायतका अत्यावश्यक वस्तु ढुवानी गर्ने ठूला सवारीसाधनको सञ्चालनमा नारायणगढदेखि नै रोक लगाइएको हो ।”
आजदेखि टिकट खुला
बडादशैँलगायतको चाडपर्वका लागि काठमाडौँबाट बाहिरका यात्रुका लागि सोमबारदेखि अग्रिम ‘टिकट बुकिङ’ खुला गरिएको प्रवक्ता डा. भुसालले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले कोभिड–१९ को महामारीको समयमा सकेसम सम्बन्धित बसको टिकट काउन्टरमा नगई अनलाइनबाट टिकट बुकिङ गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सोमबारदेखि अनलाइन टिकेटिङ र मोबाइल एप्लिकेसनको माध्यमबाट टिकट खरिद गरी ढुक्क हुन सबैसँग आग्रह गर्नुभयो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा यो समाचार छ ।